Ingqikithi yiluphi uhlelo yasebhange - iqoqo izinhlobo ezahlukene credit izikhungo namabhange kazwelonke. Izwe ngalinye inezici ayo ehlukile, kodwa uthi abantu abaningi babe izimpawu ezivamile wokwakha yasebhange izinhlelo. Ngakho, ohlelweni Banking eJalimane, eJapane nase-United States ngokuvamile kubhekwa njengento ehlukile bodwa. Ngamunye wabo has izici zayo siqu.
I-Japanese uhlelo yasebhange, naphezu intsha yayo, uma kuqhathaniswa nabangu-US kanye European, libhekene ezingeni kuqhathaniswa eliphezulu ukuthuthukiswa. Amabhange babelwa indima isakhiwo Axial e wonke amaqembu zezimali nezezimboni, ngaphezu, nabo esihlanganisa ezinye izinkampani. indzima yembuso e nemithethonqubo kanye nokuphathwa kwamabhange sinamandla ngempela.
I-Japanese uhlelo yasebhange, angase abizwe ngokuthi yesimanje, yavela ngemva kweMpi Yezwe II. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi yayakhiwe phezu imodeli American. EJapane, kukhona amabhange ukuthi kungenziwa ngokuphepha isibaluli amabhange omhlaba anothile. amaqembu zezimali-zezimboni Inamandla, izinhloko okuyizinto amabhange Japanese baphathe ezinkulu kokutshala imali e-Asia, e-Western Europe, e-Australia, e-United States.
Uhlelo yasebhange emnothweni emakethe yezwe linendima ebalulekile. It imelelwa amayunithi ezimbili. Eyokuqala - Central Bank, okubandakanya umkhandlu zezombusazwe, mabhuku 3 mphathi 8 abeluleki kanye 3 Abaqondisi Executive. Eyesibili isixhumanisi - commercial amabhange, engqondweni amabhange zesifunda, amabhange edolobheni, ukwethembana amabhange, amagatsha amabhange angaphandle kanye izinhlobo ezintsha amabhange. Ibhange emaphakathi ubizwa nangokuthi Bank of Japan, isimo salo nemisebenzi ziye ochazwa ngumthetho njengoba Kudala ngo-1942. Kamuva lo umthetho ethuthukisiwe kabili, elokugcina - ngo-1998. On isimo Bank of Japan - inkampani isitokwe ngokuhlanganyela. Anakho eziningi imisebenzi.
Eyokuqala - udaba banknotes. Ibhange emaphakathi has ayitholwa angenamkhawulo empikiswaneni imali yamaphepha. Ngokuvumelana Ministry Uhulumeni Wezezimali ubeka udaba. Ngaphambili, kuphocelela amabhange ukugcina izinqolobane. Kodwa umthetho omusha ungafaki phambili izidingo ezingahle ekwakhekeni izinqolobane, okuvumela Central Bank ukuba kwenyuswe ukuthuthukiswa olinganiselayo emnothweni Japanese ngokulondoloza ukusimama.
Eyesibili umsebenzi - ukuqaliswa komgomo wokuboleka amabhange ngezimali. Njalo ngemva kwezinyanga eziyisithupha, ibhange kufanele abike ePhalamende, kusekelwa uNgqongqoshe Wezezimali, imithetho yezezimali. Kodwa intuthuko yayo bese beqhuba ezimele kusuka kunoma iyiphi isikhungo, okungukuthi ibhange ukwenza ngokwakho.
Umsebenzi wesithathu - ekuqinisekiseni ukusebenza bushelelezi futhi esebenza kahle we uhlelo zasemizaneni phakathi credit izikhungo. Umsebenzi wesine - ukuqapha kanye ukuqinisekiswa isimo sezimali kanye nesikhundla ukuphathwa zonke izikhungo zezimali. Futhi umsebenzi yesihlanu - ukulawula sphere credit, kanye nokuqinisekisa ukusebenza ngokuphelele bushelelezi lonke uhlelo zasemizaneni nezinkokhelo ngokunikeza ukubolekisa isikhathi nomkhawulo credit izikhungo.
Kufika ku-90-yalolucwaningo we rising sun lizwe baye ayemkweleta esikhulu kunazo zonke emhlabeni. Kodwa-ke uhlelo yasebhange Japan baqala ukuzwa izimpawu zokuqala nobukhulu bale nkinga. Eminyakeni engamashumi amabili ezayo, kwakunezinkinga eziningi ezihlobene imalimboleko engenzi abacula, ekunqanyulweni izibopho zayo abanye amabhange, inkinga zezimali. Ngaphezu kwalokho, eside igalelo umnotho Japan lithole ngenxa eziningi, elalinamandla ukuwedlula izinhlekelele zemvelo.
Eqaphela ukuthi Japanese uhlelo yasebhange, kuphephile ukusho - ushintsho imigomo yezomnotho kulelizwe njalo kwenziwe ngokucophelela futhi kancane kancane. Futhi okuhlangenwe nakho okunje ufanelwe ukuyisebenzisa.
SKB: Izibuyekezo kwabasebenzi kanye namakhasimende
Indlela yokusebenzisa bondzaweni isiJalimane futhi bayini?
Inhlokodolobha Cultural nezanamuhla UK
Amaminerali amanzi - inzuzo noma umonakalo empilweni?
Kuyomfica - kulula, uma ulandela imithetho. Imithetho SDA: kuyomfica